Ihe ndepụta nke ederede ederede dị irè
Kwadebe arịrịọ nkwalite gị
Edere site Tranquillus | Jan 4, 2019 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Email kemgbe oge dị mkpa maka nkwukọrịta azụmahịa, mana nnyocha e mere site na Sendmail. Na-ekpughe na ọ kpatara ọgba aghara, mgbagwoju anya ma ọ bụ ihe ọjọọ ndị ọzọ na-akpata na 64% nke ọkachamara.
Ya mere, olee otu ị ga - esi zere nke a na ozi ịntanetị gị? Ma olee otu ị ga - esi ede ozi ịntanetị nke na - enye nsonaazụ ọchụchọ ahụ? N'isiokwu a, anyị na-enyocha atụmatụ ndị ị nwere ike iji hụ na iji iji email eme ihe doro anya, dị irè, ma nwee ọganihu.
Otu onye ọrụ ụlọ ọrụ nọ na-enweta ihe gbasara 80 ozi ịntanetị otu ụbọchị. Site na ozi akwụkwọ a, enwere ike ichefu ozi ọ bụla. Soro iwu ndị a dị mfe ka e wee mara ozi ịntanetị gị.
Ekwula okwu site na email.
Mee ozi doro anya na dị nkenke.
Lelee olu gị.
Ekwula okwu site na email
Otu n'ime ihe kachasị emetụta nchegbu na-arụ ọrụ bụ ọnụọgụ ozi nke ozi-e ndị mmadụ na-enweta. Ya mere, tupu ịmalite ide ozi-e, jụọ onwe gị, sị, "Ọ dị mkpa?"
N'okwu a, ị ga-eji ekwentị ma ọ bụ onye ozi ozugbo iji dozie nsogbu ndị nwere ike ịdabere na nzaghachi. Jiri ngwá ọrụ nkwukọrịta na-akọwapụta ọwa kachasị ekwesị maka ụdị ozi dị iche iche.
Mgbe ọ bụla o kwere omume, nye akụkọ ọjọọ ahụ n'onwe gị. Ọ na-enyere gị aka ikwurịta okwu na ọmịiko, ọmịiko na nghọta ma gbapụta onwe gị ma ọ bụrụ na ezighị ezi ozi gị.
Otu akwụkwọ akụkọ nwere ọrụ abụọ: ọ na-adọrọ mmasị gị ma chịkọta isiokwu ahụ ka i wee kpebie ma ị ga-agụ ya ma ọ bụ na ị gaghị agụ ya. Isiokwu nke ozi ịntanetị gị kwesịrị ime otu ihe ahụ.
Ihe efu nwere ike ileghara anya ma ọ bụ jụ dị ka "spam". Yabụ na-eji okwu ole na ole ahọpụtara nke ọma mgbe niile iji gosi onye nnata ọdịnaya nkeemail.
Ịnwere ike ịsonye ụbọchị ahụ na isiokwu ahụ ma ọ bụrụ na ozi gị bụ akụkụ nke usoro ozi ịntanetị kwa ụbọchị, dịka akụkọ nhazi nke izu ụka. Maka ozi na-achọ azịza, ịnwere ike ịgụnye oku na-eme ihe, dị ka "Biko tupu November 7."
GỤỌ Ọgwụgwụ mail, usoro nkwanye ùgwù ịhapụ
Ihe ederede edere nke ọma, dịka nke dị n'okpuru, na-enye ozi kachasị mkpa ma ọ bụrụ na onye natara ya enweghi ike imeghe email. Nke a bụ òkù nke na-echetara ndị natara nzukọ gị oge ọ bụla ha gara na igbe mbata ha.
Ezigbo ihe atụ Ezigbo ihe atụ
Isiokwu: nzute Isiokwu: Nzukọ na usoro GATEWAY - 09h na 25 February 2018
Debe ozi doro anya na nkenke
Emails, dị ka akwụkwọ ozi azụmaahịa, ga-edozi ma dị nkenke. Debe okwu gị dị mkpirikpi ma zie ezie. Ahụ nke email ahụ ga-abụ kpọmkwem na ihe ọmụma, ma nwee ozi niile dị mkpa.
N'adịghị ka akwụkwọ ozi ọdịnala, izipu ọtụtụ ozi ịntanetị anaghị efu karịa izipu otu. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịkọrọ onye ọ bụla na ọtụtụ isiokwu dị iche iche, tụlee dee akwụkwọ ozi dị iche iche maka nke ọ bụla. Nke a na-eme ka ozi ahụ dokwuo anya ma kwe ka onye mmekorita zaa otu isiokwu n'otu oge.
Ihe njo ojoo Ezi ihe nlereanya
Isiokwu: Nyocha maka akụkọ mgbasa
Daalụ maka izipu akụkọ a n'izu gara aga. M gụrụ ya ụnyaahụ ma echere m na isi nke 2 chọrọ nkọwa ndị ọzọ gbasara ọnụ ọgụgụ ahịa anyị. M na-echekwa na ụda ahụ nwere ike ịdịkwu n'usoro.
Na mgbakwunye, Achọrọ m ịgwa gị na m na-eme ndokwa na Friday a nzukọ na ngalaba mgbasa ozi ọha na eze na mgbasa ozi mgbasa ozi ọhụrụ. Ọ nọ na 11h00 ma ga-anọ na obere ime ogbako.
Biko, ka m mara ma ọ bụrụ na ị dị.
Daalụ maka izipu akụkọ a n'izu gara aga. M gụrụ ya ụnyaahụ ma echere m na isi nke 2 chọrọ nkọwa ndị ọzọ gbasara ọnụ ọgụgụ ahịa anyị.
M na-echekwa na ụda ahụ nwere ike ịdịkwu n'usoro.
Ị nwere ike ịgbanwe ya na ihe ndị a n'obi?
Daalụ maka ịrụsi ọrụ ike gị!
(Camille na-eziga ozi email ọzọ gbasara nzukọ PR.)
Ọ dị mkpa ịchọta nguzozi ebe a. Chọghị ịpị mmadụ na ozi ịntanetị, ọ bụ ihe ezi uche dị na iji jikọta ọtụtụ ihe metụtara ya n'otu ozi. Mgbe nke a mere, mee ka ọ dị mfe site na paragraf ndị a gụrụ agbụ ma ọ bụ ntụpọ mgbọ, ma tulee “ịgbasa” ozi ahụ gaa na obere ngalaba ahaziri nke ọma maka ịdị mfe nke ịgbari nri.
Rịba ama na na ezi ihe dị n'elu, Camille kwuru ihe ọ chọrọ Michelin ime (n'ọnọdụ a, gbanwee akụkọ ahụ). Ọ bụrụ na ị nyere ndị mmadụ aka ịmata ihe ị chọrọ, enwere ohere ka mma na ha ga-enye gị ya.
Ndị mmadụ na-echekarị na ozi ịntanetị agaghị adị ala karịa akwụkwọ ozi ọdịnala. Ma ozi ị zigara bụ ngosipụta nke ọkachamara gị, ụkpụrụ na nlebara anya na nkọwa dị oke mkpa, ya mere, a chọrọ ọkwa ụfọdụ dị mkpa.
Ọ gwụla ma gị na onye ọ bụla na-ekwurịta okwu ọma, zere asụsụ na-adịghị mma, ịgha ụgha, nkwonkwo na abbreviations na-ekwesịghị ekwesị. Ndị Emoticons nwere ike inye aka n'ịkọwa ihe ibumnuche gị, ma ọ kachasị mma iji ha na ndị ị maara nke ọma.
Mechie ozi gị na "Jiri obi eziokwu," "Ezi ụbọchị / mgbede gị" ma ọ bụ "dị mma nye gị," dabere n'ọnọdụ ahụ.
Ndị na-akwụ ụgwọ nwere ike ikpebi ibipụta ozi ịntanetị ma kesara ndị ọzọ ya, yabụ na-adị mma.
Mgbe anyị zutere ndị mmadụ ihu na ihu, anyị na-eji asụsụ ahụ ha, ụda olu, na ihu ihu iji nyochaa mmetụta ha. E-mail anaghị enweta ozi a, nke pụtara na anyị enweghị ike ịma mgbe ndị mmadụ ghọtahiere ozi anyị.
Okwu ị họọrọ, ogologo oge ahịrịokwu, akara edemede na nnukwu aha nwere ike ịmehie ya n'ụzọ na-enweghị ntụgharị ma ọ bụrụ na enweghi anya na ntinye akwụkwọ. N'ihe atụ nke mbụ dị n'okpuru ebe a, Louise nwere ike iche na Yann nwere nkụda mmụọ ma ọ bụ iwe, mana n'eziokwu, ọ dị mma.
Achọrọ m akụkọ gị n'ihu 17 taa ma ọ bụ m ga-atụ uche oge m.
Daalụ maka ịrụsi ọrụ ike gị na akụkọ a. Ị nwere ike inye m mbipute gị tupu oge 17, nke mere na anaghị m echefu ụbọchị m?
Chee echiche banyere "mmetụta" nke ozi email gị. Ọ bụrụ na enwere ike ịghọtahie ebumnuche gị ma ọ bụ mmetụta uche, chọpụta ụzọ na-enweghị isi nke ịmepụta okwu gị.
N'ikpeazụ, tupu ịpị "Zipụ", wepụta oge iji chọpụta ma ọ bụrụ na email gị nwere nsụgharị, asụsụmụma na nje edemede. Ozi ịntanetị gị bụ akụkụ nke ihe oyiyi gị dị ka uwe ị na-eyi. N'ihi ya, ọ bụ iwe na iziga ozi nwere mmejọ na usoro.
Mgbe ị na-edegharị akwụkwọ, ṅaa ntị na ogologo nke ozi-e gị. O yikarịrị ka ndị mmadụ hà ga-agụ ozi ịntanetị dị mkpirikpi ma dị nkenke karịa ogologo oge, kwusaa ozi ịntanetị, ya mere hụ na emelị gị dị mkpirikpi dịka o kwere mee, na-enweghị ewepu ozi dị mkpa.
Otutu n’ime anyi n’eme ezigbo oge nke anyi na gụọ ma cheta ozi ịntanetị. Ma ozi anyị na-eziga nwere ike iju ndị ọzọ anya.
Iji dee emelite dị irè, jụọ onwe gị ma ọ bụrụ na ị ghaghị iji ọwa a. Mgbe ụfọdụ, o nwere ike ịka mma iji ekwentị.
Mee ka ozi ịntanetị gị dị nkenke. Zipu ha naanị ndị chọrọ ka ha hụ ha ma gosi nke ọma ihe ịchọrọ ka onye nnata ahụ mee ọzọ.
Cheta, ozi ịntanetị gị bụ ihe ngosi nke ọrụ gị, ụkpụrụ na nlebara anya na nkọwa. Gbalịa iche n'echiche ndị ọzọ nwere ike isi kọwaa ụda ozi gị. Nwee ike ma na-elele ihe ị dere tupu ịpị "zipụ".
Ihe ndepụta nke ederede ederede dị irè Mee 10th, 2020Tranquillus
gara agaMkpa nke isiokwu isiokwu na email ọkachamara
-esonụNcheta nke usoro cybercourtoisie
Akwụkwọ edemede: rịọ ka a kwụọ ụgwọ mmefu ndị ọkachamara
Ndepụta akwụkwọ ozi iji kwuo ụgwọ nke ụgwọ ọrụ gị na-akwụghị ụgwọ
Lezienụ anya na ozi efu na igbe ozi gị